Myanmar OA6: Blog Times First Issue နှင့် ရှင်းလင်းချက်
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 4:33 PM
ဟားဟား မောင်ပွတ် နဲ့ မောင်ဂေါက်တို့ လက်စွမ်းကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ ။ မော်ဒယ်ဘွန်းကလည်း အပီအပြင် ပဲအပြည့်နဲ့ပါလား ။ ခေါင်းကြီးပိုင်းကပုံမှာ နားကြီး ကားထွက်နေသလားလို့ အဟတ် အဟတ် ။
ဂျီရိပ်အောက်ခိုနေတဲ့ စပိုင်ဂျစ်တူးမှ ဆက်ပြီး အင်တိုက် အားတိုက် အားပေးပါတယ် ။ အဟားး)
အဲ...အဲ... မောင်ပွတ်နဲ့ မောင်ဂေါက်...
အလှဆုံးပုံလေးကို စီဘောက်မှာ ထည့်လိုက်တာ မြင်လိုက်သလား...
ဟီး..ဟီး...တော်သေးတယ်။ မမြင်ဘူးထင်နေတာ.. ဟား..ဟား...
ရီရတယ်ဟေ့.. ဗြဲ......... အပတ်စဉ်ဖတ်ဖို့ ကြိုတင် ဘွတ်ကင်လုပ်လိုက်တယ်။
ဘလော့တိုင်ရာရောက်ပို့ပေးပါ... ပို့ဆောင်ခ ဘီယာ တစ်ဖာ :)
လူတွေကို ရီရအောင် လုပ်ပေးတဲ့ ဂေါက်ပွတ်ရေ... ကျေးဇူး အထူး...း)
ဆွဲချသြွးတယ် အ၀ဖတ်သွားတယ်. ဆက်ရေးပါဂျိုပ...
အနော်တော့ ရေချိုးမလို့ လုပ်တုန်း.
မိုက်တယ်ဗျာ... ၄မျက်နှာထဲ ဖတ်ရတာ အားမရဘူး။ နောက်တစ်တွဲကို ရှည်ရှည်ထုတ်ပါဗျို့...
(P.S စာမျက်ခွက်ကို ကြော်ငြာကွယ်နေပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖယ်ရှားပေးစေလိုပါသည်။)
သူများတွေမှာ ဖတ်ပြီးလို့ ၀ါးလုံးကွဲအောင်ရယ်နေရတယ်။ သိုးလေး ဘာမှဖတ်လို့ရဘူး။ download လုပ်တာ ရတယ်။ ဖွင့်လိုက်ရင် wordpad မှာ ဘာစာလုံးတွေပေါ်မှန်းကို မသိဘူး။ ဘာ font ပဲ ပြောင်းပြောင်း ဘာမှ မမြင်ရဘူး။ အဲဒါ ကူညီပါဦါ်။
အရမ်းကောင်းတဲ့ blog time ပဲဗျို့ နောက်လဲလာအားပေးအုံးမယ်